नेप्से आफैँले ल्याएको टीएमएसप्रति सीईओले गरे शंका, मागे–‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रणाली’
मेसी बने विश्वमै सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडी, धेरै कमाउने अरु को–को ?
काठमाण्डौ । बार्सिलोना फुटबल क्लबका फरवार्डर अर्जेन्टिनाका लिओनल मेसी विश्वकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडी बनेका छन्। फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सूचीमा मेसी अग्र स्थानमा रहन सफल भएका हुन्। उनका वार्षिक कमाइ १२६ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। जसमा मेसीले पारिश्रमिकबाट ९२ मिलियन डलर र इन्डोर्समेन्टबाट...
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित भएका छन्। नर्वेको एन्टी इमिग्रेसन पार्टीका एक दक्षिणपन्थी सांसदले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित गरेका हुन्। प्रोग्रस पार्टीका सांसद क्रिस्टियन गेजेडेले फक्स न्युजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको शान्ति...
मोडल बने बामदेव गौतम, प्रधानमन्त्री कहिले ?
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राजनीतिसँगै लेखनमा उतिकै रुचि राख्छन् । फुर्सदका समयमा राष्ट्रियभावले ओतप्रोत गीत लेख्ने गरेका उनले पछिल्लो पटक ‘यो मुक्तभूमि हो, बुद्धभूमि’ बोलको गीत रचना गरेका छन् । कोभिड– १९ का कारण यो ‘बुद्धभूमि’ नामक गीत आज भर्चुअलरुपमा सार्वजनिक भएको छ । गौतमको गीतमा...
‘वाइवाइ नेपाल स्टार’ को डिजिटल राउन्डको अन्तिम एपिसोड प्रशारणको तयारीमा
काठमाण्डौ । नेपाली मौलिक सिंगिङ रियालिटी शो ‘वाइवाइ नेपाल स्टार’ को डिजिटल माध्यमबाट तयार पारिएको दोस्रो राउन्ड सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको छ। दोस्रो राउन्ड षडज्का चारमध्ये चारै एपिसोडको छायांकन सकिएको छ भने तीन एपिसोड प्रशारण भइसकेका छन्। देशका सातै प्रदेशमा सम्पन्न अडिसनबाट छानिएका १२० प्रतिस्पर्धीमध्ये ११७ जनाले दोस्रो षडज्...
काठमाण्डौ । डेनिस बियर ब्राण्ड टुबोर्गले यस वर्षका लागि आफ्नो टुबोर्ग ओपन अभियान शुरु भएको घोषणा गरेको छ । यस वर्षको अभियानमा ग्रामी अवार्ड विजयी कलाकार जोडी ‘द चेन्स्मोकर्स्’ को साथमा सहकार्य गरी देशभरका संगीतप्रेमीहरुलाई नयाँ संगीत पेश गरिनेछ । हालै विश्वव्यापी प्रचलित कलाकारहरुमध्ये एक रहेका ‘द चेन्स्मोकर्स्’ टुबोर्ग...
द चेन र स्मोकर्सको साथमा फेरि टुबोर्ग ओपन अभियान सुरुवातको घोषणा
काठमाण्डौ । डेनिस बियर ब्राण्ड टुबोर्गले यस वर्षका लागि आफ्नो टुबोर्ग ओपन अभियान शुरु भएको घोषणा गरेको छ । यस वर्षको अभियानमा ग्रामी अवार्ड विजयी कलाकार जोडी ‘द चेन/स्मोकर्स्’ को साथमा सहकार्य गरी विश्वभरका संगीतप्रेमीहरुलाई नयाँ सांगीतिक प्रस्तुतीहरु पेश गरिनेछ । हालै विश्वव्यापी प्रचलित कलाकारहरुमध्ये एक रहेका ‘द �...
काठमाण्डौ । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन र उनका पुत्र अभिषेक बच्चनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बच्चन बाबु–छोरालाई शनिबार राति मुम्बईस्थित नानावती अस्पताल भर्ना गरिएको छ। महाराष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री राजेश टोपेले भने, ‘बच्चन बाबु–छोराको एन्टीजेन टेस्ट गरिएको थियो, जसको नतिजा दुवैमा पोजेटिभ...
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा चर्चित तथा लोकप्रिय टीभी गेम शो ‘कौन बनेगा करोडपति’ (केबीसी) यतिबेला प्रसारणको संघारमा छ। यो गेम शोको १२ औँ संस्करण हो। अहिले यो संकरणमा भाग लिनेहरुको छनोट प्रक्रिया केही दिनयता चलिरहेको छ। कोरोना संकटका कारण जारी लकडाउनका बाबजुद मुम्बईमा टीभी सिरियल र फिल्मको सुटिङ बन्द थियो। तब भारतका महानायक अमिताभ...
१० पाकिस्तानी क्रिकेटरलाई कोरोना पुष्टि, होला त इंग्ल्यान्डसँग खेलहरु ?
काठमाण्डौ। पाकिस्तानको क्रिकेट बोर्डले आफ्ना थप सात खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। थप संक्रमित हुने खेलाडीमा फखर जमान, इमरान खान, काशिक भट्टी, मोहमद हफिज, मोहमद हसनैन, मोहमद रिजवान र वहाव रिहाज छन्। यीसँगै संक्रमित हुने क्रिकेट खेलाडीको संख्या १० पुगेको छ। यसअघि गत सोमबार बोर्डले शादब खान, हारिफ रुउफ र हैदर अलि पनि...
काठमाण्डौ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट पाकिस्तानका प्रसिद्ध पूर्वक्रिकेट कप्तान शाहिद अफ्रिदी सङ्क्रमित भएका छन्। क्रिकेट खेलमा छक्का र विशिष्ट बलिङसमेतका लागि विश्वचर्चित ४५ वर्षीय अलराउन्डर क्रिकेटर अफ्रिदीले शनिबार ट्वीटरमार्फत आफूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका हुन्। उने भनेका...
काठमाण्डौ । गुुगल म्यापले नेभिगेसनका लागि बलिउडका महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चनको आवाजलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ। खबरका अनुुसार अब चाँडो नै अमिताभ बच्चनले गुुगल म्यापका लागि आफ्नो आवाज प्रदान गर्नेछन्। अहिले गुुगल म्याप नेभिगेसनमा अमेरिकाको न्युुयोर्क सहरका क्यारेन जेकब्सनको आवाज गुुन्जिने गर्दछ। गुुगल म्याप वर्तमान...
काठमाण्डौ । विश्वका उत्कृष्ट टेनिस खेलाडी रोजर फेडेरर सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएका छन्। यसरी सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको सूचीमा पुग्ने उनी पहिलो टेनिस खेलाडी पनि हुन्। गत वर्षको तुलनामा ३८ वर्षीय फेडेरर चार स्थानमाथि उक्लिदै शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएका हुन्। फोर्ब्स पत्रिकाको सर्वाधिक कमाइ गर्ने...
काठमाण्डौ। नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको उपविजेता बनेका छन् । फाइनल राउन्डमा भएको भोटिङका आधारमा दिवेश विजेता बन्नबाट चुकेका हुन्। अमेरिकाको गायन रियालिटी शोको यो १८ औँ संस्करमा पहिलोपटक एक नेपाली युवा फाइनल राउन्डमा पुगेका हुन्। आर्थर गनका नामबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दिवेशसँगै अन्तिम ५ मा जस्ट स्याम, जोनी वेस्ट,...
काठमाण्डौ। विश्व प्रसिद्ध गायन प्रतिभाको खोज रियालिटी शो ‘अमेरिकन आइडल’ को उपाधि यात्रामा नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल अगाडि बढेका छन्। आइडलको १८ औँ संस्करणको टप सेभेनमा दिवेश पर्न सफल भएका हुन्। उत्कृष्ट ११ प्रतिस्पर्धीबीचमा मतका आधारमा आइतबार सर्वाधिक मत ल्याउने उत्कृष्ट ७ को छनोट गरिएको थियो। अमेरिकाको कन्सास राज्यको विचिटा...
काठमाण्डौ । बलिउडका चर्चित अभिनेता ऋषि कपूरको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अर्का अभिनेता इरफान खानको निधन भएको भोलिपल्टै ऋषि कपूरको निधन भएको हो । उनी पनि विगत ३ वर्षदेखि नै क्यान्सरसँग लडिरहेका थिए । भारतीय फिल्म उद्योगमा जिवित दिल भएको व्यक्तिको रुपमा परिचित कपूरको निधनको विषयको सूचना अमिताभ बच्चनले ट्वीटमार्फत दिएका...